Ny sakafo Perricone hamoizana lanja toy ny FAMOUS | Nutri Diet
La Sakafo perricone dia iray amin'ireo fomba fampihenana mavesatra be mpitia indrindra ankehitriny, ary manana ny anarany a dermatologist malaza ary manam-pahaizana momba ny sakafo mitovy anarana. Ny sakafo voalaza, ankoatry ny fampanantenan-danja ny fihenan'ny lanja amin'ny fotoana fohy indrindra dia manome antoka fa manampy amin'ny fanatsarana ny toe-tsaina ary hampitombo ny haavon'ny angovo ao amin'ilay olona resahina. Sakafo efa be mpahalala ankehitriny nanomboka teo malaza maro no nanaraka azy mba hahavery lanja ary mahatratra endrika mahia.
Ity sakafo ity dia manandrana manaraka karazana sakafo otrikaina betsaka araka izay azo atao ary sorohy ny fomba mampihena ny antsoina hoe sakafo fahagagana amin'ny fotoana rehetra. Na izany aza sakafo tena kiana sy kivy be avy amina matihanina maro an'isa sy manam-pahaizana manokana momba ny sakafo izay mahita azy io ho toy ny sakafo fahagagana iray hafa izay misy fiantraikany mahery vaika.
1 Inona ny sakafo Perricone?
2 Ny vondrona sakafo folo amin'ny sakafo Perricone
3 Sakafo isan'andro Perricone sakafo
4 Ny fatiantoka amin'ny sakafo Perricone
Inona ny sakafo Perricone?
Nasongadin'ny Dr. Perricone fa misy vondrona sakafo folo miaraka amin'ny karazana otrikaina samihafa izay tsy tokony ho tsy ampy amin'ny sakafo isan'andro ho an'izay te ho very kilao. Mba hialana amin'ny fahaverezan'ny lanja sy kilao dia manome torohevitra ny fisorohana ny fisorohana arak'izay tratra fihinanana siramamy ary soloina vokatra hafa salama toy ny tantely na stevia.
Manoro hevitra ihany koa izy mba hisorohana ny fihinanana lafarinina varimbazaha na katsaka satria tsy misy otrikaina ary kaloria be loatra ho an'ny vatana. Ny vokatra hafa izay voarara amin'ity karazana sakafo ity dia ny tavy hydrogénated toy ny margarine na dibera.
Ny vondrona sakafo folo amin'ny sakafo Perricone
ny vondrona sakafo folo Narovan'ny sakafo Perricone ireto manaraka ireto:
ny Asidra matavy Omega-3 Tena mahasoa ny vatana izy ireo satria manome tavy mahasalama ho azy ireo. Izy ireo dia hita amin'ny sakafo toy ny salmon, tuna, sardine, na atody.
Ireo voankazo izay manan-karena amin'ny fibre ary manampy amin'ny fanomezana fahafaham-po ny fahazotoan-komana izy ireo toa ny paoma sy grapefruits.
Voankazo matavy be toy ny avokado. Ireo tavy ireo dia mahasalama ho an'ny vatana ary manampy azy mifehy ny kolesterola amin'ny ra.
Ny zava-manitra toy ny kanelina, nutmeg, na turmeric. Ho an'ny Perricone, ny zava-manitra dia ilaina amin'ny sakafo satria manampy amin'ny fitazonana azy ireo haavon'ny siramamy ao anaty ra ary mahasolo sira tsara.
Ny sakay dia manana hery lehibe manohitra ny inflammatoire ary manampy amin'ny fanafainganana ny metabolism izay ahafahanao manafoana kaloria amin'ny fomba haingana be kokoa.
Voanjo toy ny voanjo, amandy na voa voatavo. Manankarena izy ireo omega mahasalama 3 matavy ary misy proteinina be dia be izy ireo.
Ny legume toy ny tsaramaso na voanio dia manan-karena fibre sy fanampiana mandoro tavy haingana sy mahomby kokoa noho ny karazan-tsakafo hafa.
Yogurt satria a sakafo probiotika Manampy amin'ny fanatsarana ny flora-tsinay ary manankarena kalsioma koa io.
Ny voamadinika toy ny voan-kazo na orza dia tena mahavelona izy ireo ary misy fibra be dia be.
Legioma toy ny broccoli, epinara, na salady. Ireto sakafo ireto ambany kaloria izy ireo ary tena manankarena vitamina sy fibre.
Sakafo isan'andro Perricone sakafo
Diet dia manoro hevitra ny fisotroana Rano 2 vera raha vantany vao mifoha ianao, dia esorina ireo poizina mety ho ao amin'ny vatana.
sakafo maraina: Mety misy tortilla iray telo mazava miampy voankazo iray miaraka amin'ny oatmeal kaopy misy ronono na yaourt. Tsy mahazo manana mofo na kafe na ranom-boankazo ianao.
sakafo atoandro: Afaka manana kely ianao salmon voatono miaraka amin'ny salady maitso mitafy menaka oliva sy voankazo iray. Zava-dehibe ny misotro rano 2 vera eo am-pisakafoana.
Snack: Mandritra ny sakafo maivana dia tsara ny mandray yaorta voajanahary eo akaikin'ny voankazo sy rano iray vera.
sakafo hariva: Avela hihinana tuna voaendy miaraka amin'ny salady maitso mitafy menaka oliva sy voankazo iray. Misotro Rano 2 vera rehefa misakafo ianao.
Avela hihinana ny misasakalina voanjo vitsivitsy na voankazo sasany hanomezana fahafaham-po ny hanoanana ary tsy hahatonga azy ho noana mandritra ny fotoam-pisakafoanana, na dia ilaina aza ny misotro rano manodidina ny roa litatra isan'andro mba hitazomana ny vatana hidina tanteraka.
Ny fatiantoka amin'ny sakafo Perricone
Toy ny sakafo fahagagana hafa, manolotra valiny tsara indrindra amin'ny fotoana fohy indrindra. Manokana, ny sakafo Perricone dia manome antoka ny famoizana vitsivitsy 8 kilao ao anatin'ny iray volana monja. Ity zava-misy ity dia miteraka fa raha tsy misy fiovana ny fahazarana misakafo dia miverina amin'ny laoniny ianao noho ny tahotra. vokany. Tsy isalasalana fa ny loza lehibe indrindra aterak'ity karazan-tsakafo ity, noho izany ilaina ny manova fahazarana rehefa vita ny safidy ary misafidy sakafo mahasalama sy voalanjalanja hanampy anao hitazona ny lanjany tsara indrindra miaraka amin'ny fampiharana ny fanatanjahan-tena amin'ny fomba mahazatra. .
Ny lesoka lehibe iray hafa dia ny sakafo tsy voalanjalanja ary tsy manome ny otrikaina ilaina amin'ny vatana izany. Izany no mampidi-doza ny fanalavirana ity sakafo ity rehefa mandeha ny fotoana satria mety hijaly ny vatana olana ara-pahasalamana lehibe.
Na eo aza izany fatiantoka sy fatiantoka izany, ny sakafo Perricone dia iray amin'ireo fomba fampihenana mavesatra indrindra eto an-tany ary be dia be ny malaza izay nanohana ity karazan-tsakafo ity. Anisan'ireny, ny mpiaro tena mafy loha dia ny Mpanjakavavin'i Espana ary izany ve Ramatoa Letizia nanjary dokam-barotra tsara indrindra ho an'ity karazan-tsakafo ity.
Raha nanapa-kevitra ny hanomboka ity karazan-tsakafo ity ianao mba hahavery kilao fanampiny, tandremo tsara amin'ny horonantsary manaraka satria hanampy anao hahafantatra bebe kokoa momba ny sakafo Perricone malaza io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » Vatsim-pivelomana » Ny sakafo Perricone